Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka iPhone in Nexus
Aan wax ka akhriyey posts badan oo info web on dhaqaaqo xiriirada aan ka jir iPhone in aan Nexus cusub. Weli wareersan!
Helay caajisaan ee hore iPhone iyo wareegay Android madal? Haddii aad soo iibsatay oo taleefan ah dhaldhalaalaan Android - Google Nexus 4, waxa ugu horeeya ee laga yaabaa in aad rabto in aad samayso waa in lagu wareejiyo xiriirada ka iPhone in Nexus 4. Si kastaba ha ahaatee, ma sahlana in la qabto, gaar ahaan marka aad buuga cinwaanka on iPhone waxaa ka buuxa ee xiriirada, 1000 xiriirada tusaale ahaan. Haddii aad go'aansato in aad image karaa in xaalkaa 1,000 xiriir mid ka mid ah? Haddii aad doonayso in aad isticmaasho mid ka mid account sida qalab-dhexaadin, sida Gmail, waxa kale oo aad leedahay si ay maraan waddo dheer ka hor inta dhammaynaya.
Dhab ahaantii, hab unexceptionable in aad nuqulka xiriir ka iPhone in Nexus 4 waa in ay isticmaalaan macluumaadka telefoonka qalab kala iibsiga xirfadeed. Halkan waa xaq hal - Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Iyada oo ay caawimo, mid click oo keliya, oo dhammaan dadka ay khuseyso on iPhone la dhaqaajin doonaa Nexus 4. Haddii aad leedahay xiriir ee xisaab, sida iCloud, Yahoo !, Hotmail u baahan in lagu wareejiyo kaadhka xusuusta Nexus, waa in aad marka hore la saxiixato xisaab adiga ku iPhone. Ka sokow xiriirada, waxa kale oo kuu oggolaanaysa in aad u guurto fariimaha qoraalka ah, music, jadwalka taariikhda, sawiro iyo videos si aad u qabow Google Nexus 4.
Hab fudud si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Nexus
Fadlan kala soo bixi this version maxkamad free of MobileTrans on your computer. Markaas maraan qaybta soo socda. Halkan, waxaan kaliya qaadan version Windows sida tusaale.
Tallaabada 1. Ku rakib oo ay maamulaan this macluumaadka taleefanka kala iibsiga
Si aan ku bilaabo, waa in aad la rakibi oo ay maamulaan this phone qalab xogta kala iibsiga ka dib markii ay soo degsado. Suuqa ayaa aasaasiga ah waxaa loo soo bandhigi doonaa shaashadda kombuyuutarka aad ugu dhaqsaha badan. Markaas, riix Start .
Fiiro gaar ah: Fadlan soo baxdo iyo rakibi Lugood on your computer hor inta aadan isticmaalin MobileTrans si ay u gudbiyaan xiriirada.
Tallaabada 2. Connect iPhone iyo Google Nexus 4 kombiyuutarka
Markaas, isticmaali fiilooyinka USB ah in ay ku xidhmaan hore iPhone iyo Google Nexus 4 aad computer. Wareejinta xogta phone Tani waxay ogaan doonaa isla markiiba sida ugu dhaqsaha badan ay ku xiran tahay. Ka dib markii in, labada telefoonada lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Ugu geeska midig ee hoose, waxaa jira tab ah xogta oo cad ka hor inta nuqul . By jarayso waxa, aad awoodo in aad soo faaruqiso xiriirada aad Nexus 4 marka aad u baahan tahay.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileTrans si buuxda u la jaan qaada dhamaan noocyada iPhone, sida iPhone 5s iyo iPhone 6. sokow, waxa ay si buuxda u la jaan qaada macruufka 9/8/6/7/5. Waxaad riix kartaa halkan si aad wax badan u ogaato.
Tallaabada 3. dhaqaaq xiriirada ka iPhone in Nexus 4
Sida aad ka arki, dhammaan xogta in lagu taageeraa loo wareejin ka iPhone in Nexus 4 ayaa la hubinayaa. Si aad u gudbiyaan xiriirada oo kaliya, waa in aad ka saarto marks ka hor music, jadwalka, sawiro fariimaha, qoraalka iyo videos. Markaas riix batoonka cagaaran - Copy Start . Hubi in labada mid ah iPhone iyo Google Nexus 4 ku xiran yihiin your computer waqtiga oo dhan.
Marka habka xiriir wareejinta dhamaado, waa in aad riix batoonka "Ok".
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in lagu wareejiyo xogta ka Nexus 4 ilaa iPhone, kaliya aad u baahan tahay inaad riix batoonka "Flip" ah. Markaas sameeyo sida tallaabooyinka kor ku xusan wuxuu idin ​​tusin.
Waa hagaag, waxaad u sameeyey! Waxaad ayaa si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Nexus 4.
Sida lagu wareejinta xogta phone si sahlan loo isticmaalo, Wondershare MobileTrans awood aad ku wareejiso xiriirada ka Android inay iPhone oo nuqul ka xiriirada ka ugaar HTC in aad iPhone iyo sidoo.
Daawo ku dhaqaaqo xiriirada iPhone in Nexus 4 hanuun video ah
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka iPhone in Nexus 4